4 Vhidhiyo yekugadzira Nhema Nemhinduro Dzadzo Martech Zone
4 Vhidhiyo Kugadzira Ngano Uye Mhinduro Dzadzo
Chitatu, Nyamavhuvhu 21, 2013 Mugovera, January 23, 2021 Douglas Karr
Isu tanga tichikurudzira vese vatengi vedu kuti vawedzere vhidhiyo sechikamu cheyese nzira yekutengesa pamhepo. Vazhinji vevashanyi vako vewebhu vari kusiya yako saiti zvachose nekuti hapana vhidhiyo.
Vamwe havasi kutombozviita ipapo nekuti ako mavhidhiyo haaratidze mumhedzisiro mukutsvaga kwevhidhiyo. Youtube inoenderera ichitsvaga injini yekutsvaga kuseri kweGoogle… uye musika uri kukura.
Izvo zvakati, kune zvakawanda zvisirizvo zvisirizvo zvakakomberedza vhidhiyo maererano nekuoma kwayo uye mutengo. Pazasi pane ina ngano dzakapararira dzine chekuita nekugadzirwa kwevhidhiyo uye nemhinduro dzakaita sei SoMedia Networks inogona kubatsira:
Zvese zvehunyanzvi zvekugadzira vhidhiyo zvinodhura - Pachivanhu, kugadzira vhidhiyo kunogona kudhura zvakaringana kuita $ 1,150 paawa uye kumusoro. SoMedia Network's Scalable Vhidhiyo ipuratifomu ine zviuru zvitatu zvevazhinji-vhidhiyo vhidhiyo. Iyo chikuva inobvumidza akajairika scalable bhizinesi mavhidhiyo kudhura chero kupi kubva $ 3,000 kusvika $ 450 zvinoenderana nehurefu.
Professional-giredhi vhidhiyo yekugadzira iri kutora nguva - Kupfura, kugadzirisa uye kuburitsa yemhando yepamusoro vhidhiyo inoshandiswa kutora chero kupi kubva kumavhiki mashoma kusvika kumwedzi mishoma zvinoenderana nehurefu. SoMedia yakagadzirisa maitiro ekugadzira nekuvandudza manejimendi sisitimu mukati megore-rakavakirwa chikuva chevashandi. Nekuda kweizvozvo, vhidhiyo mapurojekiti akazara mukati memazuva gumi nemana ekupihwa basa.
Kutsvaga nekuhaya chaiyo vhidhiyo munyori wezvechikamu ndiyo inotora nguva yakawanda chikamu chebasa - Kusvika parizvino, kushandisa vhidhiyo munyori pasina kurudziro yemunhu zvave zvakaoma uye dzimwe nguva zvine njodzi huru. Nhasi, SoMedia yakafanotarisa uye yakashandisa vanopfuura 3,400 vanokwanisa maindasitiri nyanzvi dzinosanganisira vatungamiriri, vagadziri nevhidhiyo vanyori. Dzese idzi nyanzvi dzakaongororwa neSoMedia kuona sevhisi yepamusoro.
Kugadzira kunofanirwa kuitika pasi peimwe denga, kana zvichizoitwa nemazvo - Kufamba uchidzoka uye kumberi kune yekugadzira studio yaishandiswa iri nzira yakanakisa yekutarisa vhidhiyo maitiro uye kuunganidza chakapedzwa chigadzirwa. SoMedia's cloud-based service inopa kuendesa kwedhijitari mukati memazuva gumi nemana kubva pazuva rekutanga. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro uye inowanikwa mune chero fomati, iyo yegore-yakavakirwa mashandiro anokwikwidza ayo echinyakare vhidhiyo yekugadzira.
Kana iwe wakadaro akashongedzera bhizinesi rako nemimwe midziyo mikuru yevhidhiyo, mamwe makuru 3-poindi mwenje, uye unoda kuzvinyora iwe pachako, kune dzimwe nzira. Iwe unogona kushandira pamwe mukati kuburitsa yako vhidhiyo nemidziyo senge WeVideo or Animaker.
Tags: cantaloupesomediavideo editingvideo productionvideologist